Kismaayo News » Soomaaliya iyo Kenya oo isku maandhaafsan ilaalinta xeebaha
Soomaaliya iyo Kenya oo isku maandhaafsan ilaalinta xeebaha
Kn:Kulankii golaha amaanka, codsiyo is khilaafsan oo labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ay gaysteen oo muran dhaliyay ayaa wali dabkiisu sii hulaaqayaa.
Dawladda Kenya ayaa codsatay in ciidamadeeda badda lagu maalgaliyo ilaalinta xeebaha Soomaaliya, ayadoo ka duulaysa inay afka u ridato ugu yaraan toban milyan oo doolarka Maraykanka oo UN-tu u qoondaysay ciidamada AMISON ee ka hawlgala Soomaaliya waax dooda badda. Dalka kaliya ee ciidan badda ay ka joogaanna Soomaaliya marka laga hadlaayo dalalka ku deeqay ciidamada huwan magaca AMISON waa Kenya, sidaasi la adligeed ayadoo ay suuro galtahay inay jiraan damaaciyo ka sii durugsan hadana waxay Kenya is tusisay inay hantido lacagtaasi badan ee loogu talo galay inay wax looga qabto dhibaatooyinka dhinaca xeebaha ee Soomaaliya.
Dawladda Soomaaliya ayaa dhankeeda ku andacoonaysa inaysan Kenya wax u diidanayn, laakiin ay doonayso intii ciidamo dal kale lagu maalgalin lahaa ilaalinta xeebaha dalka, ay mustaqbalka dheer uga waxtar badan tahay qaranka Soomaaliyeed in lacagta lagu maalgaliyo ciidamo baddeed oo Soomaaliya leedahay. Dawladdu waxay caalamka u sheegaysaa in Soomaaliya ay u baahantahay inay dhisato ciidamo qaran oo hanan kara amaanka dalka, hawadiisa, bad iyo barriba, laakiin dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya iyo kuwa la dhaadhya tuubada lacagta, shidaalka iyo qalabka milatariba waxay rabaan in amaanka dalku uu gacantooda ku jiro.
Wali, golaha amaanku go’aan kama gaarin arimo badan oo Soomaaliya khuseeya, waxayna wadaan daraasaad iyo wada tashiyo, waxaana jira codsiyo badan oo ka tagay dhinacyo badan, laakiin kuwooda ugu muhiimsan waa; Kordhinta cimriga ciidamada Afrikaanka ee AMISON oo xiligoodu ku egyahay 7 bisha Maarso iyo waliba in ciidamo magaca UN wataayi ay ama badalaan ama la hawlgalaan, maalgalinta ciidamada badda ee AMISON ama dhisidda ciidamo baddeed oo Soomaaliya leedahay iyo waliba qaadista xayiraadda dhinaca hubka iyo dhoofinta dhuxusha.